Uncategorized Archives | Myanmar Health Research Congress
Attendees Registration on Virtual Website
Dear all attendees, Due to the unprecedented COVID-19 pandemic situation, the 49th Myanmar Health Research Congress will be held asavirtual event. It is necessary to register the video conferencing webpage to attend the 49th Myanmar Health research congress. Please open your browser and access at https://conference.caremebot.com and register with ‘Gmail’ or Careme (if you use organization […]
Dear speakers, Due to unprecedented COVID-19 pandemic situation, the 49th Myanmar Health Research Congress will be held asavirtual event. The poster presentation is to be as an E-poster [size of 48”x36” (landscape), at lease 35pt Font size] in the jpg format with3minutes pre-recorded audio presentation (MP3/MP3a). All the E-poster presenters can […]
Dear Authors and Speakers, As we all are facing the unprecedented COVID-19 Pandemic situation and adaptation to adjust to the new normal life, the 49 th Myanmar Health Research Congress will be held asavirtual event from 18th to 21st January 2021. The poster presentation is planned to as an E-poster in PDF and jpeg formats with […]
(၄၉)ကြိမ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သုတေသနညီလာခံ စာတမ်းတင်သွင်းရက် တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ခြင်း
(၄၉)ကြိမ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သုတေသနညီလာခံတွင် စာတမ်းတင်သွင်းပေးပို့လိုသူများသည် The 49th Myanmar Health Research Congress Website (https://www.myanmarhrc.gov.mm) တွင် ဝင်ရောက်၍ online မှ ပေးပို့ရာတွင် စာတမ်းအကျဉ်းကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၃၁)ရက် (စနေနေ့) သို့ လည်းကောင်း၊ စာတမ်းအပြည့်အစုံကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ(၂၇)ရက် (သောကြာနေ့) သို့ လည်းကောင်း၊ နောက်ဆုံးထားပြီး ပေးပို့ရန် ရက်တိုးမြှင့် သတ်မှတ်လိုက်ပါသည်။
(၄၉)ကြိမ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးဆိုင်ရာသုတေသနညီလာခံတွင် စာတမ်းတင်သွင်းရန်ကိစ္စ
၁။ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ (၄၉)ကြိမ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သုတေသန ညီလာခံကို ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် ကျင်းပရန် စီစဉ်ထားပါသည်။ သုတေသန ညီလာခံတွင် စာတမ်းတင်သွင်း လိုသူများသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ကြရန် ဖြစ်ပါသည်။ (က) (၄၉)ကြိမ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သုတေသန ညီလာခံတွင် စာတမ်း တင်သွင်း ပေးပို့လိုသူများသည် The 49th Myanmar Health Research Congress Website <https://www.myanmarhrc.gov.mm> တွင် ဝင်ရောက်၍ Online မှ ပေးပို့ရပါမည်။ (ခ) စာတမ်း/ ပိုစတာများကို အောက်ဖော်ပြပါ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ပေးပို့ရပါမည်။ – စာတမ်းအကျဉ်း(Abstract) ကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်လည်းကောင်း (စာလုံးရေ ၃၅၀ ထက် မကျော်လွန်စေရပါ) ၊ […]
Information for Best Paper/Poster Awards of Myanmar Health Research Congress
Following an initial screening of the submitted research papers and posters, the Academic Committee of Myanmar Health Research Congress transfers the eligible ones to the Best paper/poster selection subcommittee for further assessment. The awards comprise “Best Basic Research Paper”, “Best Applied Research Paper”, “Best Health System Research Paper”, “Bester Poster” and “Young Researcher Awards for […]
(၄၈)ကြိမ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သုတေသနညီလာခံတွင် ပြသမည့် သုတေသနပိုစတာအရွယ်အစားပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သုတေသနညီလာခံတွင် ပြသမည့် သုတေသနပိုစတာအရွယ်အစားကို ယခင်က Poster အရွယ်အစားကို (အလျား ၄ ပေ x အမြင့် ၄ ပေ) ဟုသတ်မှတ်ခဲပါသည်။ ယခုအခါ (၄၈)ကြိမ်မြောက်မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သုတေသနညီလာခံတွင်ပြသမည့် သုတေသန ပိုစတာအရွယ်အစားမှာ (အလျား ၃ ပေ x အမြင့် ၄ ပေ) အဖြစ်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ကြောင်း သုတေသီများ အားအသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။
(၄၈)ကြိမ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သုတေသနညီလာခံ စာတမ်းတင်သွင်းရက် တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ခြင်း
(၄၈)ကြိမ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သုတေသနညီလာခံတွင် စာတမ်းတင်သွင်းပေးပို့လိုသူများသည် The 48th Myanmar Health Research Congress Website (https://www.myanmarhrc.com) တွင် ဝင်ရောက်၍ online မှ ပေးပို့ရာတွင် စာတမ်းအကျဉ်းကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၃၁)ရက် (ကြာသပတေးနေ့) မွန်းလွဲ (၃:၀၀)နာရီ သို့ လည်းကောင်း၊ စာတမ်းအပြည့်အစုံကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ(၂၂)ရက် (သောကြာနေ့) မွန်းလွဲ (၃:၀၀)နာရီ သို့ လည်းကောင်း၊ နောက်ဆုံးထားပြီး ပေးပို့ရန် ရက်တိုးမြှင့် သတ်မှတ်လိုက်ပါသည်။
(၄၇) ကြိမ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သုတေသန ညီလာခံ ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး တက်ရောက် အဖွင့်အမှာစကားပြောကြား
ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီလ (၈)ရက်နေ့ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးသည် ယနေ့၊ နံနက်ပိုင်းတွင် ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်တွင် ပြုလုပ်ကျင်းပသည့် (၄၇) ကြိမ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သုတေသန ညီလာခံ ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်၍ အဖွင့်အမှာ စကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားရာတွင်- • ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ဆေးနှင့် ဆေးနှီးနွှယ် တက္ကသိုလ်များနှင့် ကျောင်းများ၊ ဆေးရုံများ အပါအဝင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ဌာနအသီးသီး တို့တွင် သုတေသနပြု လုပ်သည့် သုတေသနယဉ်ကျေးမှု (research culture) ပိုမိုဖြစ်ထွန်း ဖွံ့ဖြိုးစေရေး အလေးထား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ • အမျိုးသားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု စနစ်ကြီးတစ်ရပ်လုံး၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ထိရောက် အကျိုးရှိမှု ပိုမို မြင့်မားစေရန်အတွက် အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သော […]